पढ्नुस् : सेयर बजार भनेको के हो र कतिखेर किन्ने सेयर ? - Arthikbazar.com
पढ्नुस् : सेयर बजार भनेको के हो र कतिखेर किन्ने सेयर ?
तपाईहरुलाई जानकारी नै छ कुनै पनि ठूलो कम्पनी ज्ञसंञ्चालन गर्नको लागि सानो पुँजीले पुग्दैन । दुई चार जनाको पैसाले मात्रै पनि नपुग्न सक्छ । वा चलिरहेको कम्पनीलाई क्षमताबृद्धि (अपग्रेड) गर्नुपरो, कुनै नयाँ योजना ल्याउनुपरो त्यसको लागि पैसा पर्याप्त नहुन पनि सक्छ ।
लेखक – शिबहरी खतिवडा
आजको भोलि दोब्बर फाईदा हुन्छ भनेर हैन, कम्तिमा ६ महिना एक वर्षको लागि लगानी गर्नुहोस् । कारोबार गर्नेहरु थोरै मुल्य तलमाथि हुँदा पनि आत्तिएर सेयर बिक्री गरेको हुन्छन् । तर लगानीकर्ताको लागि एक दिनको कारोबारमा तलमाथि हुनु ठूलो कुरो होईन । उदाहरणको लागि मैले हालै करिब २५ डलर प्रतिसेयरमा किनेको रोकु टिभीको सेयर मुल्य घटेर १९ डलरमा बेच्दा त्यसको केही दिनमै मुल्य उकालो लागेर ५० भन्दा माथि पुग्यो । यसरी लगानीसंगै अनुभवले पनि तपाईलाई राम्रो खेलाडी बनाउने छ ।
यो निकै महत्वपूर्ण विषय हो । सेयर लगानीबाटै अर्बपति बनेका अमेरिकी लगानीकर्ता वारेन बफेटको नाम त कतिले सुन्नुभएकै होला । उनको लगानीको एउटै मन्त्र भनेको लगानी विविधिकरण हो । यसले तपाईको सेयर लगानी एउटा घाटामा गएपनि अर्कोले धान्न सक्छ त्यसैले सबै पैसा एउटै कम्पनीमा हाल्नुभयो भने त्यो कम्पनी डुब्यो भने तपाई पनि डुब्नुहुने छ । त्यसैले सकेसम्म धेरैवटा कम्पनीको सेयर खरिद गर्नुहोस् जसले एउटाको घाटा अर्कोले पूर्ति गर्न सकोस् ।
कतिखेर किन्ने सेयर ?
कसैले मलाई कतिखेर सेयर किन्ने भनेर सोध्यो भने मेरो सिधा जवाफ भनेको सबैभन्दा घटेको समयमा किन्नु भन्ने हो । सबैभन्दा न्यून विन्दुबाट सेयर किन्नुभयो भने तपाईलाई धेरै फाईदा हुने छ । त्यसैले सबैसमय उच्च मुल्य भएको सेयर किन्नुभन्दा औषत रुपमा कम भएको तर कालान्तरमा फाईदा हुने कम्पनी छानेर सेयर किन्नुहोस् । त्यसैले धेरै महत्वकांक्षीभएर सेयर किन्नुभन्दा अध्ययन गरेर सेयर किन्नुभयो भने तपाई साच्चिकै सफल लगानीकर्ता बन्न सक्नुहुने छ ।